६ कात्तिक, काठमाडौं । कैलालीमा तस्करी रोक्न खोज्दा प्रहरीका असइ गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउद मारिएको घटनाले केही आशंका उब्जाएको छ । प्रहरीले केराउ ९मटर०का मुख्य तस्करलाई पक्राउ गरेको छैन । पक्राउपछि सार्वजनिक गरिएका सात जना अधिकांश भरिया मात्रै पाइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रतीक विष्ट शनिबार राति १० देखि ११ बजेको बीचमा असइ विक र जवान साउदको हत्या भएको अनुमान गर्छन् । दुवै जना राति १० बजेदेखि नै सम्पर्कविहीन भएका थिए । तर, त्यसबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइतबार बिहान १० बजे मात्रै खबर गरिएको थियो । माथिल्लो निकायमा समयमै किन खबर गरिएन ?
सीमा नाकामा हुने चोरी तस्करी र आपराधिक गिरोह समात्न जाने क्रममा स्थानीय कमान्डरले माथिको कमान्डरलाई जानकारी वा सूचना दिने फोर्सको ‘चेन अफ कमान्ड’भित्रै पर्छ । त्यसो हो भने ब्याक फोर्स किन गएन ?
दुई प्रहरी मारिएको घटनास्थलको पूर्व र पश्चिम सशस्त्र प्रहरीका दुईवटा बीओपी छन् । पूर्वतर्फको बीओपीको दूरी झन्डै एक किमि मात्रै छ । तर, त्यस रात सशस्त्र प्रहरी गस्तीमा गएको देखिँदैन । ‘संयोग हो वा जानी–जानी हो थाहा भएन । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।